IselfowuniMapper 6, ukubonwa kokuqala-iGeofumadas
Ikhaya/cadastre/MobileMapper 6, ukuqala kokuqala
MobileMapper 6, ukuqala kokuqala
Emva kokusebenza kunye MobileMapper Pro, apho sinezinto ezithile ezonelisayo (ayizizo zonke), kulo nyaka sizakusebenza nemodeli eguqukileyo (0 eyilwe ngokutsha) yeMagellan ebizwa ngokuba yiMobileMapper 6. Masibone ukubonakala kokuqala:
Yintoni eyenza ihluke kwiPro
Into ephambili kukuba sele ifika neWindows Mobile 6, eguqula ngokupheleleyo imeko ngoba yangaphambili imenyu yayo ivalwe kwimisebenzi yeqela ngenjongo yokubamba idatha.
Ukuba neWindows Mobile kuthetha ukuba inemisebenzi yePokotho, exhasa iinkqubo ezisetyenziswa njengeLizwi, i-Excel, ikhibhodi ebonakalayo, (kubandakanya iOfisi yeFowuni) kwi-Intanethi, isoftware yomntu wesithathu, enje ngeArcPad okanye ukusebenza kweGIS njengeMephu yeMfono.
Ikwaquka ikhamera ye-2 Megapixel, isikrini sokuchukumisa, uqhagamshelo lwe-USB, ikhampasi ye-elektroniki, imakrofoni, isithethi, isibane se-LED, uqhagamshelo lweBluetooth, phakathi kwabanye. Njengesoftware iza neMephu yeMfono, kule nguqulo 2.0. Ukudityaniswa kwezi zinto kungakhokelela kwiziphumo ezingcono okanye ubuncinci kuthintele imeko yokuqala: elo candelo libaluleke ngakumbi kunedatha.
Ukuchaneka kokulungiswa kweposi kuye kwancipha, oku kuya kufuneka ndibone. NgePro kwakunokwenzeka ukuba kwenziwe ulungiso olwahlukileyo kunye nokufumana ukuchaneka kobuso obuphakathi kweesentimitha ezingama-40 nezingama-80; Kucingelwa ukuba ngale inokuba phakathi kwe-1 kunye ne-2 yeemitha, kusakulungile ukuba kwenziwe uphando nge-cadastral ngexabiso eliphantsi ngexabiso elijikeleze i- $ 2,000 kubandakanya isoftware yokwenza emva kwayo. Nangona ibonwa kakuhle kwiinjongo ezingezizo ze-cadastral okanye ukuyidibanisa nezinye iindlela ezichanekileyo okanye ezingathanga ngqo.
Enye inzuzo kukuba le nto ayikwazi ukusebenza njengesiseko, kodwa kunokwenzeka ukwenza ukuthunyelwa kweposi emva kwedatha ekwabanjwe nge-MobileMapper Pro.
Inyani yokuba iza neWindows yongeza uthotho lomngcipheko, ngakumbi ngenxa yokusetyenziswa gwenxa, njengobungozi obukhulu kwiintsholongwane kunye nobomi bebhetri obuncinci. Ewe kunjalo, kubalulekile ukukhulisa ulwazi kubasebenzi ukuba ayisosixhobo sokumamela umculo, iividiyo okanye ukuthatha imifanekiso yomfazi oze ze. Kwaye ayisiyiPocketPC ukuya kwi-Intanethi kwiindawo apho kufikeleleka ngaphandle kwamacingo.
Kufanele ukuba ibuthathaka ngakumbi kunePro, nangona iphakamisa ukuba inokumelana ne-1 yemitha yokuhla kwendlela, endingenakho ukuyivavanya. Kananjalo ayizi nekhadi le-SD, kuya kufuneka uyithenge ngokwahlukeneyo ngaphandle kokuba uthethathethwano nomthengisi.
Uninzi, ndiya kukuxelela njengoko siwufezekisileyo kunye ne-Garmin Legend ejongene nokusetyenziswa kwendawo yasemaphandleni, i-MibileMapper Pro kwaye isitishi esipheleleyo ukusetyenziswa kwedolophu; ke, siya kusebenzisa nokuchithwa kwesikrini apho kukho ukukhutshwa Google ukuthetha.
Ubuncinane i Pro intloko ebuhlungu, olwaqala ukusuka ikhadi SD yayinokususwa, kuba nangona impazamo mveliso ebangwa umanyano Magellan, inkxaso usoloko zibangelwa neentsholongwane.
Kufuneka kwakhona ukuba uyeke umkhuba ungafundi igalelo manual kuba ndiyaqonda ukuba iqhosha off xa singazi bamba imizuzwana eziliqela Kumiswe kuphela le nkqubo (okanye off screen); oku kuya kubangela ibhetri ukuba ikhuphe.
PD Inkathazo yaseLatin America iyaqhubeka, kwisigqi sezifundo ezingazange zifunde kulokho uHugo Chávez wenza iminyaka yokugcina ye-15 kunye nenkani yokuba abapolitiki abazange benze i-30 yokugqibela.
I-PhotoModeler, ukulinganisa nokulinganisa ihlabathi lenene
Ukuvavanya i-Aigo MP5, eziliqela kwenye
i-ramer ramos uthi:
Ngomhla, ndifuna ukwazi ukuba unokunceda ndiqale i-mobila mapper 6, mbulela
Ukuhambelana noMhlaba kaGoogle -Contouringge okanye i-AutoCAD